Sikubuyisela kanjani kabusha okuqukethwe ngempumelelo | Martech Zone
Ngamenyelwa engxoxweni mayelana Blab.im Emasontweni ambalwa edlule bekuyingxoxo enhle kakhulu okuqukethwe okuphindayo. Sibona izinkampani eziningi ziqhubeka nokulwa nokukhiqiza okuqukethwe - futhi ukuphindaphinda okuqukethwe akuyona nje indlela yobuvila yokwaba kabusha okuqukethwe, kuyindlela enhle yokwandisa isu lakho lokuqukethwe.
KwaMartech, sibhala izindatshana eziphakathi kuka-5 no-15 ngeviki. Eziningi zalezo okuqukethwe okuqukethwe okuhlanganisiwe esikufaka umbala nencazelo, futhi. Lokhu okuthunyelwe kuyisibonelo esihle - isihloko se- Ungakubuyisela Kanjani Okuqukethwe ingenye ebengifuna ukubhala ngayo, kepha i- i-infographic eyenziwe yi-ExpressWriters kwangikhuthaza ukuba ngiqedele okuthunyelwe futhi nginikeze izeluleko zami.
Sibuyisela okuqukethwe ngamasu amathathu ahlukene:
Ukuvuselela okuqukethwe - Sivame ukuqaphela ukuthi i-athikili endala, ephelelwe yisikhathi, iyaqhubeka nokunakwa kubhulogi ngakho-ke siyaphuma siyocwaninga ngesihloko sonke, sivuselele izithombe, sizame ukuthola ividiyo, siphinde sishicilele i-athikili eku-URL efanayo njengesha . Ngoba i-athikili isivele inamandla okusesha, ijwayele ukwenza kangcono kuzinjini zokusesha. Futhi ngenxa yokuthi i-athikili yabiwe njengeqembu, izinkomba zokwabelana ezinkinobho zethu zishayela ukwabelana ngokwengeziwe. Ungavumeli okuqukethwe okuhle kufe!
Isiphambano Esiphakathi - Le infographic ikhuluma kakhulu ethubeni lokwethula isihloko esifanayo kuma-mediums. Lokhu sikwenza futhi, sixoxa ngokuthunyelwe kwethu ku-podcast yethu yokumaketha futhi senza amavidiyo wokumaketha. Ngokubambisana sisebenzisela amaphepha amhlophe, ama-ebook kanye ne-infographics ngezikhathi ezithile.
Ukumba ngokujulile - Senze isu eliyimpumelelo namakhasimende ethu ngokuwasiza akhe igunya ngokuqukethwe, hhayi nje ukukhiqiza ukusakazwa okungapheli kwako. Lesi sihloko sisukile futhi sacelwa ukuthi sethule kuso, sibhale iphepha elimhlophe kuso, futhi semba ngokujulile ekucwaningeni isihloko. Kwesinye isikhathi ubhala indatshana enhle bese impendulo ithi “meh”. Kepha kwesinye isikhathi ubhala i-athikili bese iyasuka! Thatha ithuba lokumba ujule kulezo zihloko ezidumile - ungazibuyisela kabusha njenge-infographics, amaphepha amhlophe, ama-webinar nezethulo.
I-infographic yabiwe futhi ibukwe, ngokwesilinganiso, Izikhathi ezingama-30 ezinkulu kunokuthunyelwe kwebhulogi - ukuze ubone ukuthi ukuthatha i-athikili yakho nokwakha okubukwayo kuyo kungasinaka kakhulu isihloko. Ababhali be-Expresser batusa ukushintsha ama-athikili akho abe yizethulo, imihlahlandlela, okuqukethwe okuhlala kuluhlaza, i-infographics, ama-podcast namavidiyo.
Tags: ukukhiqizwa kokuqukethweucwaningo lokuqukethweisiphambano esiphakathiababhaliindlelaukubuyisela kanjani okuqukethwe kabushainfographicokuqukethwe okwenziwe kabushaivuselela okuqukethwe
TweetReach: Ingabe I-Tweet Yakho Ihambe Kangakanani?
Kungani iTeknoloji Isibalulekile Empumelelweni Yokudlela